NextMapping | भविष्यलाई मर्दाना र स्त्री विशेषताहरूको साथ नेताहरूको आवश्यकता छ
भविष्यलाई मर्द र स्त्री विशेषताहरूको साथ नेताहरूको आवश्यकता छ।
हामी संसारमा एक धेरै महत्त्वपूर्ण समय र स्थान मा छौं। प्रत्येक दिन हामी पुरुष र महिला दुबै पुरुष र महिला द्वारा महान र कतै महान् नेतृत्वको उदाहरण देख्दछौं, चाहे कर्पोरेसनमा होस्, सुरूवात होस् वा राजनीति होस्।
विगतमा नेतृत्व विशेषताहरू मुख्यतया पुल्लिंगी थिए कि नेताहरूको प्रशंसनीय विशेषताहरू ड्राइभ, निरंकुशता, कमान्ड, नियन्त्रण, पदानुक्रम, वर्चस्व र डर प्रलोभन थियो। दुबै पुरुष र महिला नेताहरूले प्रभावशाली मर्दाना विशेषताहरूको साथ नेतृत्व गर्न सक्छन्।
विगतमा नेतृत्वको मुख्य रूपमा पुल्लिंगी शैलीबाट अग्रसर गर्नु सफलताको साथ बराबर थियो।
को चुनौती नेतृत्वको मर्दाना प्रमुख शैली आजको वास्तविकता मा यो छ कि यो अब आफ्नै लागि काम गर्दैन। धेरै परिवर्तन भएको छ। टेक्नोलोजीले कामको लोकतान्त्रिकरण गरेको छ र कामदारहरूको मनोवृत्ति द्रुत गतिमा परिवर्तन हुँदैछ।
म आफैंको नेतृत्व नेतृत्व क्यारियर मा नेतृत्व को एक प्रमुख मर्दाना शैली को नेतृत्व बाट दोषी छु। स्पष्ट कुरा मलाई कुनै राम्रो कुरा थाहा थिएन। मैले ती व्यक्तिहरूलाई सफल पारे पछि मेरो नेतृत्व शैली मोडें जुन त्यसबेलाको'० को दशकको शुरुमा म केवल मोडेलहरू थिए जुन मुख्यतः पुरुष थिए। मसँग मेरो पुरुष साथीहरू जस्तो अग्रणी सफलताको एक निश्चित मात्रा थियो तर मैले भित्तामा प्रहार गरें। हाँसउठ्दो कुरा के हो भने यो रोन नामको एक पुरुष नेता थिए जसले मलाई यसो भन्दै कार्यको जिम्मा दिएका थिए, “म चीनको पसलमा साँढेजस्तै थिएँ र मेरो पूरै टीमले मलाई काम गर्न निकै गाह्रो लागेको महसुस गरे”।
सुरुमा मैले रोनको मतलब बुझ्न सकिन, मेरो मतलब मैले शानदार परिणामहरू पाइरहेको थिएँ, मेरा ग्राहकहरूले मलाई माया गरे तर रोनले भने, "मेरो टोलीले मलाई यति धेरै माया गरेन।" यो सुनेर गुनगुनाउँदै थियो कि त्यहाँ एउटा सामान हुनु भन्दा पनि नेता हुनु बढी थियो। रोनले मलाई नेतृत्वको अधिक महिला गुणहरूको प्रशिक्षण दिए जसमा सहयोगी हुनु, समावेशी हुनु, हेरचाह गर्नु, अरुलाई बढाउन इच्छुक हुनु र मेरो टीमलाई मभन्दा टाढा सफल हुन मद्दत गर्न पनि समावेश छ।
नेतृत्वको महिला विशेषताहरू अक्सर 'सफ्ट कौशल' को साथ एकैचोटि भएका हुन्छन् यसले मलाई कुनै किसिमको चिन्ता गर्दैन! र म भाषालाई 'आवश्यक मानवीय सीपहरू' मा परिवर्तन गर्ने लक्ष्यमा छु।
नरम कौशलहरू जसमा उनीहरूलाई हाल समावेश गरिएको छ, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, मुखर संचार कौशल, द्वन्द्व प्रबन्ध कौशल, सहयोग कौशल र रचनात्मक समस्या समाधान गर्न केही नामहरू।
यहाँ कुरा हो - यो कि पुरुषत्वको नेतृत्व शैली 'खराब' वा त्यो होईन स्त्री नेतृत्व शैली 'राम्रो' छ। लक्ष्य भनेको ध्रुवीयताबाट टाढा सर्नु हो जुन प्रत्येक शैली एक अर्काको बिरूद्ध छ र नेतृत्वको दुबै शैलीको 'एकीकरण' लाई अँगाल्नु हो।
हामी धेरै नेताहरु कोच र भविष्य कसरी तयार हुने र भविष्यका तयारी टोलीहरूको नेतृत्व कसरी गर्ने भन्ने बारे कार्यकारीहरू। हामीले के पत्ता लगाइरहेका छौ कि धेरै नेताहरू भ्रममा काम गरिरहेका छन् कि कि त उनीहरू निरंकुश र प्रत्यक्ष हुनु आवश्यक छ वा कि तिनीहरूले मानिसहरूलाई उनीहरूले के गर्न दिनु पर्छ। न त आफैंमा दृष्टिकोण उत्तर हो। सबै भन्दा राम्रो नेता दुबै पुरुष र पुरुष नेतृत्व विशेषता संग एकीकृत छन्।
उत्तम नेताहरूको बारेमा सोच्नुहोस् जुन तपाईंलाई थाहा छ - हुनसक्छ तपाईं अहिलेको लागि काम गर्दै हुनुहुन्छ वा विगतमा एउटाको लागि काम गर्नुभयो। उसको विशेषता के हो?
म यसको निम्न संयोजनहरूको अनुमान गर्न लागिरहेको छु:
स्पष्ट संचारको साथ सीधा
सीधा द्वन्द्वको सामना गर्न तयार
दृष्टि र टीमलाई वास्तविक कामको लागि दृष्टि लिंक गर्न सक्षम
स्वयं र टीमको भलाइको लागि जोखिम लिन तयार छ
खुला र पारदर्शी
टीम सफल हुन सहयोग गर्न इच्छुक
दबावमा दिशा प्रदान गर्न सक्षम
उसको वा उनको टोलीको बुद्धिमत्तालाई सजिलो बनाउँदछ
प्रदर्शन गर्न कोच टीम
टीमको सदस्यहरुलाई उसको वा उनको सर्वश्रेष्ठ क्षमताहरु लाई उत्तरदायी राख्दछ
टोलीले समस्या समाधान गर्न मद्दतको लागि स्रोतहरू प्रदान गर्दछ
आवश्यक पर्दा सन्दर्भ र दिशा प्रदान गर्दछ
सहयोग गर्न टीम प्रोत्साहित गर्दछ
यसको सबै रूपहरूमा विविधतालाई अँगाल्छ (लि gender्ग / संस्कृति / व्यक्तित्व)
चुनौतिहरु संग सम्झौता मा टाउको र पूर्ण जिम्मेवारी लिन्छ
उनको वा उनको प्रतिबद्धताबाट सिक्न र बढ्नको लागि टीमलाई प्रेरणा दिन्छ
माथिका सबै विशेषताहरू पुल्लिंग र स्त्री दृष्टिकोणहरूको मिश्रण हो।
जब एक नेता धेरै धेरै मर्दाना गइरहेको छ तब ऊ वा उनी धेरै आक्रामक, धेरै माग, धेरै बदमाशी, धेरै बेवास्ता र मान्छे को खर्च मा तल्लो रेखा वा व्यापार मा केन्द्रित छ।
जब एक नेता धेरै धेरै स्त्रीहरु मा चलिरहेको छ तब ऊ वा उनी धेरै निष्क्रिय, धेरै इच्छा धुवाँ, पनि अडान लिन डर लाग्दो, गाह्रो मान्छेलाई सम्बोधन गर्न इच्छुक छैन र मानिसहरूलाई व्यवसायमा उत्तरदायी बनाउनकोलागि मन पराइएकोमा केन्द्रित छ।
हामी सबैसँग मर्दाना र स्त्री विशेषताहरू छन्। हामीमध्ये कसैको व्यक्तित्वमा अधिक प्रभावशाली मर्दाना हुन्छन् भने कोही व्यक्तिको व्यक्तित्वमा बढी स्त्रीलिंगी हुन्छन्।
भविष्यमा नेतृत्व लिने क्रममा सबै नेताहरूका लागि अवसर भनेको नेतृत्वमा प्रभावशाली मर्दाना वा स्त्री दृष्टिकोणले समग्र नेतृत्व प्रभावकारितामा बाधा पुर्‍याइरहेको छ कि छैन भन्ने वरिपरि आत्म जागरूकता विकास गर्नु हो।
मेरो केसमा मैले माथि उल्लेख गरें कि प्रभावशाली मर्दानी नेतृत्वको समयावधि समयावधि समाहित भयो तर एकपटक जब मानिसहरूले मसँग विद्रोह गरे तब म उठ्यो कि मलाई केहि परिवर्तन गर्नुपर्‍यो र त्यो मेरो हो।
पछिल्ला दुई दशकहरुमा म दुबै पुरूष र महिला नेतृत्वको एकीकृत दृष्टिकोणमा एकीकृत हुनुमा केन्द्रित थिए र मलाई बताउन चाहन्छु - जब तपाईंको दृष्टिकोणमा दुबै एकताबद्ध छन् यो धेरै राम्रो लाग्दछ। अझ महत्त्वपूर्ण कुरा तपाईको नेताको रूपमा तपाईको प्रभाव छिटो बढ्छ र अन्तिम परिणाम संलग्न टोलीहरू, प्रेरित टोलीहरू, प्रेरित टोलीहरू र वफादारीले तपाईंलाई पछ्याउँदछ जहाँ तपाईं पछ्याउँदछ।